Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago » TTAL iji gbasaa ngwaahịa njem nlegharị anya nke Tobago na niche ahụike
Ancil Dennis, onye odeakwụkwọ ukwu Tobago na odeakwụkwọ maka njem, omenala na ụgbọ njem
Okporo ụzọ nke Tobago Tourism Agency Limited maka ụzọ ito 2020 - 2023 kọwara mkpa ọ dị inyocha niche na niche dị iche iche, yana nkwado na ime ka akụnụba dị ugbu a dị ọhụrụ.
Njem nlegharị anya ahụike na-etinye ahụike na ọdịmma mmadụ na ntọala nke ahụmịhe njem ha.
Achọpụtara niche njem nlegharị anya ahụike dị ka nhọrọ ga -ekwe omume ka etolite ka ọ bụrụ ngwaahịa njem nlegharị anya dị mma na asọmpi.
Ụlọ ọrụ Tobago ga -achọ iwulite ụdị ahụike ọpụrụiche nke dabara na akara akara ebe njedebe nke ịnye ahụmịhe “Karịrị Nkịtị” gafere ihe onyinye ọdịmma.
TobagoNdị isi njem nlegharị anya ebidola ọrụ nwere akụkụ atọ nke ga-eji atụmatụ azụlite ọmarịcha njem nlegharị anya maka ebe ọ na-aga, yana usoro nke mbụ gụnyere ọgbakọ na-abịanụ nke na-abịanụ “Inyocha Wellness Tourism 360” site na Julaị 8.th ka 9th, 2021.
Okporo ụzọ nke Tobago Tourism Agency Limited maka ụzọ ito 2020 - 2023 kọwara mkpa ọ dị inyocha niche na niche dị iche iche, yana nkwado na ime ka akụnụba dị ugbu a dị ọhụrụ. N'ịtụgharịghachi akụ nke Tobago iji chọpụta ikike uto na oge njem nlegharị anya na njem COVID, a chọpụtara niche njem nlegharị anya dị ka nhọrọ ga-ekwe omume ka etolite n'ime ngwaahịa njem nlegharị anya dị mma na asọmpi.
Onye nsọpụrụ Ancil Dennis, onye odeakwụkwọ ukwu Tobago na odeakwụkwọ maka njem, omenala na ụgbọ njem kwuru:
Enwere m ahụ iru ala na Tobago nwere ihe niile dị mkpa maka njem nlegharị anya ahụike. Ikuku ọhụrụ, ebe mara mma, oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mmega ahụ na -atọ ụtọ na -enweghị njedebe. N'ezie, nke a bụ otu akụkụ dị iche iche nke njem nlegharị anya nke Tobago House of Assembly na -ekwu maka ogologo oge ugbu a iji gbanwee ngwaahịa njem anyị. Covid-19 enyela anyị ohere pụrụiche iji tọgharịa. Anyị nọ n'ụlọ Mgbakọ Tobago ka na -agbasi mbọ ike ịkwado gburugburu ebe obibi yana ịnye akụrụngwa dị mkpa iji hụ na Tobago gara n'ihu na mma na asọmpi ya. "
Njem nlegharị anya ahụike na-etinye ahụike na ọdịmma mmadụ na ntọala nke ahụmịhe njem ha. Njem ndị a haziri n'ụkpụrụ njem nlegharị anya na -agụnyekarị nri dị mma, mgbatị ahụ, ọgwụgwọ spa, na ohere ị nweta mmepe zuru oke na ihe omume ime mmụọ gụnyere mgbasa ozi na yoga. Agbanyeghị, maka Tobago, ụlọ ọrụ ahụ ga -achọ imepụta ụdị ahụike ọpụrụiche nke kwekọrọ na akara akara ebe a na -enye ahụmịhe "Karịrị Nkịtị" nke gafere ihe onyinye ahụike dị mma.